बि.सं.२०७५ साल बैशाख ८ गते शनिवारको राशिफल
नेपाली मितिः वि.सं. २०७५ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३९ । बैशाख महिनाको ८ गते शनिवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१८ अप्रिल महिनाको २१ तारिख ।
तिथीः उत्तरायण, बसन्त ऋतु बैशाख शुक्लपक्षको षष्ठी तिथि, २०ः५४ बजेपछि सप्तमी तिथि ।
योगः अतिगण्ड योग, १०ः३९ बजेपछि सुकर्मा योग ।
नक्षत्रः आद्र्रा नक्षत्र ।
करणः कौलव करण १०ः०६ बजेसम्म, उपरान्त तैतिल करण ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १८ः३१ बजे ।
राहुकालः ०८ः४९ बजेपछि १०ः२७ बजेसम्म ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन केही कैफियत वा दोष औंलिनसक्ने छ ख्याल गर्नु होला । रपनि वाणीमा ओजस्विता एवम् माधुर्यताको विकास हुनेछ । व्यापार एवम् व्यवसाय आदिमा राम्रो कारोबार हुनसक्ने छ । धुकुटीमा धनधातु तथा खजानाको बृद्धि हुनेछ । कहीहद्सम्म मान्छेहरुलाई वाणी तथा प्रवचन–भाषण एवम् तर्कले प्रभाव पार्नसकिने छ र प्रशंसा पनि मिल्नेछ । परिवारमा नयाँ सदस्य वा नाता–कुटुम्ब अर्थात परदेशी कसैको आगमनले तथा कसैकसैकोमा शुभसमाचार प्राप्त हुनाले वातावरण रमाइलो हुनेछ । परपाहुनाको सेवासत्कारमा अल्लि व्यस्त पनि हुनपर्ने सम्भावना रहनेछ । दोषजन्य परिस्थितिबाट बच्नको लागि माँ बगलामुखीको उपाशना गर्नु होला । विद्वान गुरुजनको आर्शिवाद पनि विशेष हितप्रद हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन रमाइलो एवम् सन्तोषप्रद रहनेछ । अनुकूल वातावरण बन्ने र मनोकामना पूर्ण हुनेछ । प्रशंसा मिल्ने हुनाले कामकार्यमा उत्साह बढ्नेछ । खुशी र उमंग छाउनेछ । निमन्त्रणा तथा स्वागत सत्कारको अवसर एवम् सौगात आदिको सम्भावना पनि देखिएको छ । सहयोगी भेटिने र व्यापार एवम् व्यवसायिक कार्यबाट राम्रो फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ । यहाँहरुको लागि आज एक अंक, रातो रङ्गको प्रयोग र भगवान हनुमानको सेवा शुभप्रद रहनेछ भने गुरुजनहरुको आर्शिवाद लिनु पनि उपयुक्त हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन संघर्षको अनुभूति गराउने खालको रहेको छ । साविकभन्दा बढी कोसिस गरेर मात्रै काम सुल्झाउन सकिएला । खर्चका बहानाहरु बढ्नसक्ने र काममा पनि केही झमेला तथा ब्याबधान आउनसक्ने सम्भावना छ । झुटो आरोपको पनि सम्भावना भएकोले सावधानीपूर्वक सामाना गर्नु पर्ला । हतारभन्दा पनि सोँचविचार गरेर मात्रै प्रस्तुत हुनु बुद्धिमानी हुनेछ । बुद्धि र संयमको अभ्यासले परिणाम आफ्नो पक्षमा ल्याउन र आकस्मिक केही लाभ एवं उपलब्धि हासिल गर्न सकिनेछ । आज यहाँलाई तीन अंक, पहेंलो रङ्ग र भगवान महाकाल शनिको सेवा आराधना शुभकर हुने छ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन व्यवसायिक क्षेत्रबाट राम्रो लाभ गर्नसकिने छ । परीक्षा तथा प्रतिस्पर्धामा उर्तिण तथा विजयी हुनसकिने दिन छ । सन्तानको पक्षबाट पनि सन्तोष मिल्नेछ । अधुरा रहेका कामहरुलाई पूर्णता दिने गरी समय तथा अवसरको सदुपयोग गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । विवाह प्रसङ्गको पनि सम्भावना देखिन्छ । समर्थन तथा सहयोग प्राप्त हुने र प्रशंसा पनि बढ्नेछ । आज यहाँलाई दुई अंक, सेतो रङ्ग उपयुक्त हुनेछ भने माँ जगद्काली भगवतीको श्रद्धाभक्ति तथा स्तुति गर्नुले थप सफलता मिल्ने छ ।
तुला राशिहुनेहरुको लागि आज केही ब्याबधानको बाबजुत पनि अनुकूलोन्मुख एवं भाग्यप्रद छ । धार्मिक–आध्यात्मिक सत्चिन्तनको विकास हुने तथा सात्त्विक विचार र आस्थामा प्रगाढता आउनेछ । कामकार्यमा आएका अवरोध एवं अपजश हट्दै जाने तथा लाभ एवं सफलता हातपार्न सकिने देखिएको छ । उच्चवर्गसँग संपर्क विस्तार हुनेछ भने सोले महत्त्वाकांक्षा पनि बढ्नसक्ने । जिम्मेवारी एवं मनोबल उच्च हुनेछ । व्यवसायिक क्षेत्रबाट यथोचित लाभ हातपर्ने छ । कसैकसैलाई अल्लि बढी महत्त्वाकांक्षा बढ्नाले केही मानसिक तनाब नबढ्ला भन्न भने सकिँदैन । प्रेमसम्बन्ध सार्थक बन्नसक्ने छ । ब्याबधानलाई कम गर्न माँ भुवनेश्वरीको उपाशना गर्नु मनासिब हुनेछ ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन स्वास्थ्यमा प्रतिकूलता पर्नसक्ने सम्भावनालगायतका केही संघर्षजन्य परिस्थितिको सामना गर्नपर्ने खालको देखिएको छ । कार्यक्षेत्रमा केही अबरोध सृजना हुनसक्ने भएकोले सावधानीपूर्वक सामना गर्ने मानसिक बल बढाउनुहोला । आज कुनै पनि कार्य हतार नगरी होस पुर्याएर गर्नु बुद्धिमानी हुनेछ । धैर्यता र संयमले प्रतिकूल समय टर्न दिनु उचित हुनेछ । अप्रत्यासित लाभ एवं उपलब्धि पनि हुने देखिएको छ । आठ अंक एवम् रातो रङ्गको प्रयोगआज यहाँको लागि शुभ रहनेछ । रोगी तथा दीनदुःखीप्रति सेवा सहयोग गर्नुले पनि कष्ट निवारण गर्न मद्दत पुग्नेछ ।
मीन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अनुकूल मान्न अल्लि नसकिने खालको छ । संघर्षको अनुभूति हुनसक्ने ग्रहगोचर परेले काम कार्यमा मान्छेहरुले आलोचना गर्नसक्ने वा अपजश दिन सक्नेछन् । हतास मानसिकतालाई संयम गर्ने र धैर्यताको अभ्यास गर्ने गर्नाले दुष्परिणामबाट बच्न मद्दत मिल्नेछ । आज तपाईले जनव्यवहारमा आवश्यकभन्दा बढी सरोकार नराखेकै राम्रो हुनेछ । भइपरि आउने दैनिकी कामकार्यमा सकारात्मक चिन्तनको साथमा लाग्नु भएमा सम्भावित प्रतिकूलतालाई कम गर्न र केही काम बनाउन सकिनेछ । आज तपाईको लागि मातृशक्तिसँग समन्वयात्मक कार्य गर्नु विशेष शुभप्रद हुनेछ ।